बुद्धिमानलाई आयो कोरियादेखि यति ठुलो सहयोग, अहिलेसम्म कति रकम उठ्यो ! भिडियोसहित - SamacharpatiSamacharpati
बुद्धिमानलाई आयो कोरियादेखि यति ठुलो सहयोग, अहिलेसम्म कति रकम उठ्यो ! भिडियोसहित
प्रकाशित मिति: 2075 फाल्गुन 27 सोमबार(March 11, 2019) 10:31 AM बजे Posted By: Samacharpati
भक्तपुर, २७ फागुन । भारतको सिमलाबाट दुई हात र एक खुट्टा गुमाएर आएका बुद्धिमान कुवंरको भारतको सिमलामा लेवरी काम गर्दै गर्दा उनले बोकेको सरीयाले विद्धुतीयको तारमा छुन पुग्दा करेन्ट लागेर दुई हात र एक खुट्टा गुमेको थिए । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले उपचारमा समेत समस्या भएको उनले बताएका छन् ।
उपचारकै लागि कुवंर परिवारले ६० हजार रुपैयामा आफनो थोरै बारी समेत बिक्रि गरिसकेका छन । आफुलाई दिशा पिसाव आवतजावत गर्न सक्ने सम्मको उपचारका लागि सहयोग गरिदिए औधि खुशि हुने उन्को भनाई छ । २३ बर्षका बुद्धिमानका एक श्रीमति र ४ बर्षिय छोरा छन् । उनलाई अझै उपचारको लागि पैसाको आवश्यकता रहेको छ । बुद्धिमानलाई सहयोग गर्नको लागि ९८२२४१५५२७ मा सम्पर्क गर्न सकिने पारीवारीक श्रोतले जनाएको छ । उनको अबस्था देखेर सामाजिक सञ्जालमा समेत उन्का सुभचिन्तकहरुले सहयोगको याचना गरेका छन । कतिले सहयोग पनि गरिसकेका छन्।
भाग्य न्यौपाने किन गए भिम बहादुरलाई भेट्न्..सबैले
काठमाडौको एउटा कोठामा हेर्नुहोस.. कसैलाई नपरोस् यस्तो
ललितपुरको बिषयमा जेठाजुको यस्तो अचम्मको बयान,कथालाई किन